OKlebe basongela iMeya kwelezigidi zemali - Bayede News
Isithombe: bguNomampondo Plaatjie
Isikhulu sizisola ngethenda yaseFree State
Bathi amathe azobuyelwa kwasifuba kuMeya kaMasipala wesifunda i-Alfred Nzo, e-Eastern Cape, abophiko loKlebe ekhale ngehaba ngokugasela kwabo kulo Mkhandlu ngoLwesihlanu okubikwa ukuthi bebeyofuna imininingwane ngophenyo oluhlanganisa osomabhizinisi nezikhulu zoMkhandlu mayelana nokukhwatshaniswa kwemali ebalelwa kuzigidi ezingama-R36.
UColonel uPhilani Nkwalase okhulumela oKlebe ukusho lokhu ngemuva kokuthi iMeya uSixolile Mehlomakhulu itshele abezindaba ukuthi ukugasela koKlebe kube yihaba kwazise nophenyo abalwenzayo yinto yangowezi-2014 futhi osekwaqedwa ngayo njengoba nenkantolo icala yalihoxisa ngenxa yokugqoza kobufakazi.
IMeya uMehlomakhulu izwakalise ukukhathazeka ngesithombe esakhiwe oKlebe ngesikhathi begasela lapho befike behamba nabezindaba kwabukeka sengathi kukhona ukugebengu obuyovundululwa kumbe kuzoboshwa abathile kanti kuyofunwa umqingo wethenda ephenywayo.
Lolo phenyo lwenziwa abeSpecial Task Team abafika bathatha yonke imininingwane ukuhlanganisa nalowo mqingo okwabikwa ukuthi kuzodluliselwa koKlebe kuphenywe icala lokwephulwa komthetho.
“Siphazamiseke kakhulu ukuthi bangathi bezofuna umqingo wethenda nje kuphela bavele babange umsindo ongaka edolobheni nasemahhovisi oMkhandlu okuphazamise ngisho izisebenzi njengoba besinomhlangano nabacwaningimabhuku nawo ogcine ubhuntshile lapho besibanika imininingwane ngesimo sezimali soMkhandlu njengoba sisezinhlelweni zokuthi sithole umbiko wezimali ongenagcobho kulo nyaka,” kusho iMeya uMehlomakhulu.
Noma kunjalo uCol uNkwalase uthe kungamampunge okushiwo iMeya njengoba uphenyo abalwenzayo lungahlangene nalolo lwezigidi ezingama-R 300 lwangowezi-2014.
“Thina sinophenyo lwethu olusha olusuka kunyaka wezi-2014 kuya kowezi-2018 olumbandakanya nosomabhizinisi abathile okubikwa ukuthi babe nobudlelwane nezinye izikhulu zoMkhandlu,” kusho uCol uNkwalase. Ulibeke ngembaba elokuthi bazobopha maduze yize enqabile ukudalula inani labazoboshwa ngoba ethi kungenzeka lenyuke.
Uthe bona bebenza umsebenzi wabo ongahlangene nezepolitiki nokuzama ukudicilela phansi isithunzi soMkhandlu njengoba kushiwo.
ngu-Andile Moshoeshoe Sep 28, 2020